Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Bernd Leno Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha ya "Ọnwụ na-egbu mmadụ". Anyị Bernd Leno Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, ndụ ọrụ mmalite ya, okporo ụzọ ama ama, ibili na akụkọ ama ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ nọ n'etiti ndị na-eche nche kacha mma n'ụwa. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Bernd Leno's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Bernd Leno nke nwata - mmalite ndụ na azụ ezinụlọ:
A mụrụ Bernd Leno na 4 March 1992 na ndị mụrụ ya; nne ya, Rosa Leno na nna, Viktor Leno na Bietigheim-Bissingen, Germany. Ezinụlọ Bernd Leno sitere na German-Russian sitere na nna ya nke bụ ọkara German, ọkara Russian.
Leno toro na nwanne ya nwoke na obere obodo Bietigheim-Bissingen na ndịda Germany nke nwere Stuttgart dị nso.
Ndị maara Leno mgbe ọ bụ nwata hụrụ ya ka nwa nwoke nwere ume. E tinyere ume dị otú ahụ n'ime egwuregwu. N'ikwu maka egwuregwu, onye ọ bụla nọ na ezinụlọ Bernd Leno hụrụ football n'anya. Dị ka Leno tinyere ya;
“Football dị ezigbo mkpa nye ezinụlọ m, maka nwanne m nwoke na mụ onwe anyị bụ ndụ anyị. Anyị na-achọ ịkụ bọl mgbe niile, inwe bọọlụ n'akụkụ anyị. N'oge ahụ, ihe egwuregwu ọ bụla bụ football. "
Ná mmalite n'oge ezumike, Leno ga-aga na-egwu egwuregwu mpaghara karịsịa na "ọdụ ọjọọ" nke na-enweghị ihe ọ bụ n'ihi na ya na ndị enyi ya nọ. Mgbe ọ dị afọ 6, o kpebiri iji bọlbụ kpọrọ ihe site n'ịhọrọ ọrụ.
Bernd Leno Biography - Ndụ Ndụ Mbụ:
Leno debara aha ya n'akwụkwọ ndekọ aha ndị otu ntorobịa ya SV Germania Bietigheim nke nyere ya ohere ịtọ ntọala ọrụ ya. Ọ malitere ịkwanye dị ka onye ọkpọ ọkpọ site na mgbe ọ sonyere klọb ahụ.
Mkpebi Leno siri ike ịbụ ọkachamara abụghị naanị echiche efu. Mkpebi dị otú ahụ mere ka ọ nwaa ọnwụnwa n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka ukwuu.
Mgbe ọ dị afọ 11, Leno tinyere aka na òtù VfB Stuttgart na-eto eto ma họpụta ya ịga ule. Ọ sonyeere ndị na-eto eto 200 bụ ndị e debara aha ha ka ha bịa na-anwale ọnwụnwa.
O di nwute, Leno di n'etiti ndi 6 ndi VfB Stuttgart choputara mgbe ha kwenyere ndi nkuzi. Leno ka na-aga n'ihu na-aga n'ihu dị ka midfielder.
Bernd Leno Biography Eziokwu - Ụzọ Ebube Akụkọ:
Otú o si ghọọ onye na - elekọta ụlọ: Dị ka onye na -eto eto na -eto eto, Leno mere ọtụtụ ihe ịlaghachi azụ iji chekwaa azụ azụ yana ọbụna onye na -eche nche n'ọtụtụ oge.
Nke a ka o mere ruo mgbe ọ dị afọ 10 tupu ihe emee ka ọ bụrụ onye na -eche nche. N'ajụjụ ọnụ Arsenal FC, Leno ozugbo akuko. N'okwu ya;
“Otu ụbọchị, onye na-eche nche nke si n’obodo m n’obodo m abịaghị otu egwuregwu, yabụ onye nchịkwa jụrụ onye chọrọ ịbụ onye na-eche nche.
Agwara m ha, 'Achọrọ m ịnwale'. M gbalịrị na onye ọ bụla hụrụ na m dị mma. Mgbe ahụ ndị mụrụ m zụtara m uwe aka ma achọghị m ịhapụ isi ihe mgbaru ọsọ ahụ mgbe nke ahụ gasịrị. ”
Ihe mere Leno ji nwekwuo obi ụtọ na ọ bụ ihe mgbaru ọsọ ya bụ arụsị ya, ọ dịghị onye ọ bụla ọzọ karịa onye na-eche nchebe Arsenal, Jens Lehmann.
Ọ bụ ezie na dịka nwatakịrị, Leno na-ebute ụzọ ya site na Spanish na mbụ Real Madrid akara ngosi Iker Casillas. Ọ bụ na Stuttgart Leno mbụ zutere Jens Lehmann onye ọ naara ọtụtụ nchịkọta mgbakọ site na. N'ikwu okwu banyere nke ahụ, ọ gwara otu mgbe Arsenal Pịa;
Anọ m na-ele ya ọtụtụ oge ọzụzụ ya na ọbụnakwa soro ya nwee ọzụzụ mgbe m dị ihe dị ka afọ 16 ma ọ bụ 17. Ọ gbasiri ike, ọkachamara. Nke ahụ bụ echiche dị gị mkpa dị ka ọkachamara na-eche nche.
Onye bụbu onye mgbaru ọsọ Arsenal, Lehmann ka nọ na VfB Stuttgart mgbe Leno jikọtara klọb ya. Leno hụrụ onwe ya dị ka onye ga -anọchi Lehmann mgbe a na -akwalite ya n'òtù ndị isi klọb ha.
O di nwute maka ndị egwu, Leno kpebiri ịnabata ebe ịta nri ahịhịa ndụ mgbe afọ abụọ gachara ya na klọb nke na -egwuri egwu na nke atọ nke Germany. Ọrụ Leno nwetara ya tiketi Bundesliga na Bayer Leverkusen.
Bernd Leno Biography - Bilie ka ewu ewu:
Ịga site na ngalaba nke atọ nke German ruo ụzọ nke mbụ bụ ihe ịma aka ma n'otu oge ahụ na -atọ ụtọ maka Bernd Leno onye bụ naanị 19 n'oge ahụ.
Ọ bụ ihe ịma aka n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ mere asọmpi mbụ ya megide Chelsea naanị mgbe izu atọ nke isonye klọb ahụ gasịrị.
N'oge egwuregwu ahụ, Leno gosipụtara arụmọrụ dị ịtụnanya megide onye egwu kachasị mma nke Chelsea, Didier Drogba.
N'ajụjụ ọnụ, Leno chetara ozugbo;
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, Petr kwuru na obi tọrọ ya ụtọ ma nwee obi ụtọ maka m. Ọ dịghị mkpa ikwu ihe ndị ahụ kama enwere m ekele maka ya. Nke ahụ bụ afọ asaa gara aga ma ugbu a, anyị na-agbakọta ọnụ na Arsenal - ọ dị nzuzu!
Mgbe Njikọ Njikọ ahụ rutere, ọ bịara doo anya na Bayer Leverkusen achọtawo dike ọhụrụ n'ime onye na-eche nche.
Ị maara?… Njikọ Njikọ ahụ Njikọ nyere Leno European award maka nwata kachasị mgbe ọ ga-egwu na UEFA Champions League. Ọ bụ naanị afọ 19 na ụbọchị 193.
Mgbe ọpụpụ Jens Lehmann gasịrị, Leno ghọrọ onye otu egwuregwu mbụ mgbe ọ gbasasịrị nnukwu arụmọrụ.
Ọ gara nọnyere Bayer Leverkusen site na 2011 ruo 2018 na -eme ngosi 233. Ihe mere nke ọma n'afọ ndị ahụ niile ruo otu BỤ ỤBỌCHỊ!
Nrụgide tobịakwute Ya: Onye ọ bụla maara na Leno nwere obi ike dị ukwuu - nchịkọta ya. Mana onweghị onye ma ihe mere ya n'ụbọchị ọjọọ a n'ime Ọktoba 2015 mgbe o mere ihe mgbaru ọsọ mgbaru ọsọ Bundesliga kacha njọ nke oge.
Na egwuregwu Bundesliga ya na Augsburg, Leno kwadoro ka o kpochapụ ihe na-adịghị njọ na-eche ihu Jonathan Tah n'ime azụ ụgbụ ya. Lelee vidio dị n'okpuru;
Na-ekwu okwu ọkụ n'obi mgbe okwu ndị agbapụ wakporo ya, Leno kwuru;
“Dị ka Onyenchekwaebumnobi, ị bụ onye naanị onye mgba. Train na-azụ iche iche, ị na-ekpo ọkụ iche. Na-alụ ọgụ maka otu ebe ma ọ bụrụ na ị mehie otu ihe, ị ga-abụ onye nzuzu ngwa ngwa.
N'oge a, o doro anya ụbọchị ikpeazụ Leno na klọb German ọ hụrụ n'anya ga -abịa. Naanị ihe o mere bụ ichere ohere ka ọ pụọ.
Ọ dabara nke ọma, na 19th nke June, 2018, klọb Bekee Arsenal nweta ọrụ ya. Nke a nyere Leno ohere izute ezigbo enyi ya Petr Čech.
Dị ka akara aka ga -enwe ya, Leno ghọrọ onye mgbaru ọsọ nke ga -anọchi onye ọzọ na -eche nche nke Arsenal. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na -bụ Nwunye Bernd Leno - Sophie?
Bernd Leno nọ na Sophie Christin kemgbe Ọgọstụ 15, 2015, nke ga -abụ ụbọchị ha na -eme emume ncheta ha.
Sophie onye sitere na German na Czech sitere na ụbọchị 17th nke February 1997 (5 Afọ dị obere karịa nwoke ya) na Dusseldorf, Germany.
Ọ bụ nwa akwụkwọ na -azụ ahịa nke na -etinyekwa oge ịkpụzi. A hụla ndị enyi abụọ ahụ n'ọtụtụ ebe dị egwu na -ekpori ndụ ezumike ha.
N'agbanyeghị na ha nọkọ ogologo oge, ma ndị hụrụ ya n'anya enweghị atụmatụ ọ bụla maka agbamakwụkwọ ha. Otú ọ dị, ọ bụ naanị oge tupu agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ maka ha abụọ.
Ndụ nkeonwe Bernd Leno:
Ịmata ndụ onwe onye nke Bernd Leno site na ichebe mgbaru ọsọ ga -enyere gị aka ịchọta ya nke ọma.
Malite na ya, ọ bụ onye Roman Katọlik site n'okwukwe. Leno emeela otu ugboro iji gaa na St. Peter's Basilica, Vatican dị na Rome iji nweta ihe ọ kpọrọ "oge pụrụ iche" na Pope Francis.
A Real FIFA Gamer: Mgbe ya Arsenal egbe Hector Bellerin na Rob jide ga -egwu egwuregwu ịgba égbè; Oku ọrụ, Bernd Leno dị ka Juan Ezigbo ga-adabere na FIFA.
E gosipụtara nkwanye ùgwù Leno maka Casillas na nhọrọ ndị otu ya na usoro egwuregwu FIFA. N'ikwu okwu banyere nke ahụ, o kwuru otu oge ...
"Ana m egwuri egwu mgbe niile dị ka Real Madrid na PlayStation," o kwuru. "Casillas bụ nnukwu ihe kpatara nke ahụ".
Eziokwu Bernd Leno - Eziokwu Ọrụ Ọrụ:
Otú E si nweta aha ya- "Ọnwụ na-egbu ”: Ọ bụ ezie na Leno mụtara ọtụtụ ihe n'aka Jens Lehmann na Iker Casillas, ọ nwere ike ịkụziri ndị mgbaru ọsọ abụọ a ihe. Nke ahụ bụ omume nke “ịchekwa ntaramahụhụ” nke nyere ya aha otutu ọ hụrụ n'anya.
Ị maara?… Nke mbụ Leverkusen glovesman otu oge kwụsịrị ịkpa oke kwụsịrị ntaramahụhụ ise n'ime asatọ na ntụpọ Bundesliga na 2013/14. Ọ zọpụtara n'ezie anọ n'usoro. Dị ka n'oge edere, ọ nweghị onye mgbaru ọsọ dị ndụ (ma onye na -arụ ọrụ na onye lara ezumike nká) nke meriri ndekọ ụwa ahụ.
ntachi obi: Leno nwere ntachi obi dị ukwuu, n'adịghị ka ọtụtụ ndị mgbaru ọsọ nke oge a. Ọ nwere imi gbajiri agbaji debere ọkwa ahụ ọ dịghị mgbe ọ na -atụ ụjọ ịkwụ ụgwọ maka ndị na -emegide ya iji wee nara ha bọọlụ ahụ.
Nke a mere n'asọmpi Champions League nke ikpeazụ egwuregwu 16 megidere Diego SimeoneAtletico Madrid.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ anyị Bernd Leno Child Story tinyere Nwepụ Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Akwụkwọ akụkọ bọọlụ Bayer Leverkusen
Patrik Schick Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ